Ogaden News Agency (ONA) – Hawlwadeenada jaaliyada S.Ogaadeeniya oo shir muhiim ah isugu yimid.
Hawlwadeenada jaaliyada S.Ogaadeeniya oo shir muhiim ah isugu yimid.
Posted by ONA Admin	/ May 13, 2014
Waxaa maalintii Axada shir muhiim ah isugu yimid xubnaha jaaliyada magaalada Edmonton, kaasoo sidii caadada inoo ahayd lagu furay wacdi diini ah oo xambaarsanaa macno aad u weynaa ilaahay ha inagu anfaco.
Shirka waxaa furay gudoomiyaha jaaliyada mudane C/raage Cali wuxuuna aad ugu mahadceliyey xubnaha shirka ka soo qayb galay iyo sida ay mar walba diyaarka ugu yihiin in ay u shaqeeyaan umadooda gumaysigu dulaystay, wuxuu halkaa ku soo bandhigay qorshe sanadeedka jaaliyada iyo waxa looga baahan yahay sanadkan. Gudoomiyuhu isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu xubnaha ku booriyey in ay isku duubni muujiyaan si dhab ahna umadooda ugu shaqeeyaan si aynu u gaarno ujeedadeena ah in aynu gumaysiga ka takhalusno xornimona gaadhsiino shacabkeena.
Waxaa lagu soo dhaweeyey shirka isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yusuf Ismaaciil oo ka hadlay xaalada dhabta ah ee ka jirta gudaha Ogaadeeniya iyo tacadiyada uu gumaysigu ku hayo shacabkeena oo ah mid si weyn looga damqado, sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay xaalada maanta Ethiopia ku sugan tahay iyo mudaharaadyada gilgilay aduunka oo dhan kaasoo jaaliyadaha soomaalida ogaadeeniya si weyn uga qayb qaateen tanina ay tusaale u tahay in ay soo dadajinayso burburka Ethiopia ,wuxuuna si weyn ugu mahadceliyey jaaliyada Edmonton oo si muuqata uga qayb qaadatay mudaharaadkii ka dhacay magaalada.
Waxaa hadalka qaatay Sheekh Maxamed oo ku cusub Canada kana yimid bariga afrika gaar ahaan jaaliyada Kakuuma ee xeryaha qaxootiga. Wuxuu aad uga hadlay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Ogaadeeniya kaasoo uu mudo u xidhnaa gumaysiga kana sheekeeye wixii halkaa ku soo maray iyo naxariis darada taala iyo sida bini’aadanimada ka baxsan ee loola dhaqmo shacabka birimagaydada ah ee soomaalida ogaadeeniya ee ku dhaqan dhulkii hooyo.
Ugu dambayntii waxaa halkaa lagu iclaamiyey in shirweynihii jaaliyadu dhici doono May 18/2014 si weyna loo soo abaabulo shacbiweynaha soomaaliyeed ee maanta gumaysigu isku fidiyey iyo shacbiga ogaadeeniya ee ku sugan gobolka Alberta waxaana lagaga hadli doonaa qadiyada ogaadeeniya iyo xaalada bariga afrika ay maanta ku sugan tahay,wuxuuna shirkaasi ku dhamaaday guul.